GỤỌ NKE Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Gujarati Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Portuguese Romanian Russian Setswana Slovak Slovenian Swahili Ukrainian
Ihe Ịma Aka n’Ala Ndị Na-emepe Emepe
ỌTỤTỤ ndị taa aghaghị itinye mgbalị dị ukwuu iji nọgide na-adị ọcha, karịsịa n’ala ndị mmiri dị ọcha na usoro mkpofu ihe kwesịrị ekwesị dị ụkọ. Ma, mgbalị ọ bụla e mere iji nọgide na-adị ọcha efughị ọhịa. A na-eme atụmatụ na ihe na-akpata ihe karịrị ọkara nke nrịanrịa nile na ọnwụ nke ụmụaka bụ nje ndị na-abanye ha n’ọnụ site n’aka ruru unyi ma ọ bụ nri na-adịghị mma ma ọ bụkwanụ mmiri na-adịghị ọcha. A pụrụ igbochi ọtụtụ nrịanrịa, karịsịa afọ ọsịsa, site n’itinye aro ndị na-esonụ, ndị e depụtara na Facts for Life, bụ́ akwụkwọ Òtù Maka Ụmụaka nke Mba Ndị Dị n’Otu bipụtara, n’ọrụ.
1 Na-ekpofu nsị n’ụzọ kwesịrị ekwesị
Ọtụtụ nje na-adị na nsị. Mgbe nje ndị na-akpata ọrịa banyere na mmiri nakwa ná nri ma ọ bụ mesa mmadụ n’aka, banye n’arịa ndị e ji eme ihe n’ụlọ, ma ọ bụ n’ihe ndị e ji akwadebe ma na-ekunye nri, ha pụrụ ịbanye n’ọnụ, e loo ha, ha akpata ọrịa. Ụzọ kasị mma isi mee ka nje ndị dị otú ahụ ghara ịgbasa bụ site n’ikpofu nsị nile. E kwesịrị ịdị na-anyụ nsị n’ụlọ mposi ma ọ bụ n’ogwe. Hụ na e nweghị nsị anụmanụ n’ụlọ, n’ebe ndị a na-esi agafere, ma ọ bụ n’ebe ụmụaka na-egwuri egwu.
N’ebe ndị a na-enweghị ụlọ mposi ma ọ bụ ogwe, lie nsị n’ala ozugbo a nyụrụ ya. Cheta na nje ndị pụrụ ịkpata ọrịa na-adị nansị nile, ọbụnakwa nsị ụmụ ọhụrụ. E kwesịkwara ịdị na-ekpofu nsị ụmụaka n’ogwe ma ọ bụ lie ya n’ala.
Na-edebe ogwe na ụlọ mposi ọcha mgbe nile. Na-ekpuchi ogwe ekpuchi, ọ bụrụ ụlọ mposi nke a na-eji mmiri eme ihe na ya, hụ na i ji mmiri wụba nsị.
2 Na-akwọ aka gị
I kwesịrị ịdị na-akwọ aka gị mgbe nile. Iji ncha na mmiri ma ọ bụ ntụ na mmiri akwọ aka na-asachapụ nje ndị dị na ya. Iji nanị mmiri akwọ aka ezughị—ọ dị mkpa ka i jiri ncha ma ọ bụ ntụ kwoo aka gị.
Ọ dị oké mkpa ka ị na-akwọ aka gị mgbe ị nyụsịrị nsị nakwa mgbe i hichasịrị ikè nwa ọhụrụ ma ọ bụ nwatakịrị ka nyụpụrụ nsị. Ọzọkwa, kwọọ aka gị mgbe i metụsịrị anụmanụ aka, tupu i metụ nri aka, nakwa tupu i nye ụmụaka nri.
Ịkwọ aka na-eme ka arị ndị na-akpata ọrịa ghara ịbanye mmadụ n’ahụ́. Arị ndị a na-epe nnọọ mpe nke na a pụghị ịhụ ha ma ọ bụrụ na e jighị ígwè ọrụ e ji ahụ ihe ndị anya na-apụghị ịhụ. Ha na-ebi n’ime nsị nakwa na mamịrị, na mmiri dọọrọ adọrọ nakwa n’ala, n’anụ a na-esighị esi ma ọ bụ nke a na-esigheghị esighe. Ụzọ bụ́ isi e si egbochi arị ịbanye mmadụ n’ahụ́ bụ site n’ịkwọ aka. Ọzọkwa, site n’iyiri akpụkpọ ụkwụ mgbe ị nọ nso n’ogwe, ị pụrụ igbochi arị ndị pụrụ ịdị n’ebe ahụ ịbanye gị n’ahụ́ site n’ọbụ ụkwụ gị.
Ụmụaka na-etinyekarị aka ha n’ọnụ, n’ihi ya, na-akwọ ha aka mgbe nile, karịsịa mgbe ha nyụsịrị nsị nakwa tupu ha eriwe nri. Kụziere ha ịdị na-akwọ aka ha na ịghara igwuri egwu n’akụkụ ogwe, ụlọ mposi, ma ọ bụ ebe ndị a na-anyụ nsị.
3 Na-asa ihu gị kwa ụbọchị
Iji nye aka mee ka ị ghara ibute ọrịa anya, na-eji ncha na mmiri asa ihu gị kwa ụbọchị. E kwesịkwara ịdị na-asa ụmụaka ihu. Ihu ruru unyi na-adọta ijiji, bụ́ ndị na-ebu nje. Nje ndị a pụrụ ịkpata ọrịa anya na ọbụna ikpu ìsì.
Na-enyocha anya ụmụ gị mgbe nile. Anya ndị na-ebughị ọrịa na-enwe mmiri ma na-egbuke egbuke. Ọ bụrụ na anya nwatakịrị enweghị mmiri, na-acha ọbara ọbara, ma ọ bụ na-afụ ya ụfụ ma ọ bụkwanụ nwee nsị anya, onye ọrụ ahụ́ ike ma ọ bụ dọkịta kwesịrị inyocha anya ya.
4 Na-eji nanị mmiri dị ọcha eme ihe
Ezinụlọ agaghị na-arịakebe ọrịa mgbe ha na-eji mmiri dị ọcha eme ihe ma na-eme ka nje ghara ịbanye na ya. Mmiri gị pụrụ ịdị ọcha ma ọ bụrụ na o sitere na paịpụ mmiri a rụrụ nke ọma ma na-elekọta nke ọma ma ọ bụ n’olulu mmiri na iyi a na-emetọghị emetọ. Mmiri sitere n’ọdọ mmiri, osimiri, na tankị mmiri ma ọ bụ n’olulu mmiri ghere oghe, eyikebeghị ka ọ̀ ga-adị ọcha, ma a pụrụ ime ka ọ ghara ịdịcha ize ndụ site n’isi ya n’ọkụ.
E kwesịrị ịdị na-ekpuchi olulu mmiri ekpuchi. E kwesịrị ịdị na-asa bọket, ụdọ, na ite ndị a na-eji esere mmiri nakwa ndị a na-eji agbanye mmiri mgbe nile ma na-edebe ha n’ebe dị ọcha, ọ bụghị n’ala. E kwesịghị ịhapụ ụmụ anụmanụ ka ha gaa n’ebe ndị a na-esi enweta mmiri ọṅụṅụ nakwa na gburugburu ụlọ. Ejila ọgwụ ahụhụ ma ọ bụ kemikal eme ihe na nso ebe a na-ekute mmiri.
N’ụlọ, e kwesịrị ịdị na-edebe mmiri n’arịa dị ọcha, nke e kpuchiri ekpuchi. Ọ kasị mma inwe arịa e ji agbanye mmiri, nke nwere isi pọmpụ. Ọ bụrụ na arịa mmiri ahụ enweghị isi pọmpụ, e kwesịrị iji efere ma ọ bụ iko dị ọcha na-ekuru mmiri na ya. E kwesịghị mgbe ọ bụla imetụ aka ruru unyi na mmiri ọṅụṅụ.
5 Ekwela ka nje banye ná nri
Site n’isighe nri esighe, ị pụrụ igbu nje ndị dị na ya. E kwesịrị isighe nri esighe, karịsịa, anụ. Ụmụ nje na-amụba ngwa ngwa ná nri na-adịchaghị ọkụ. N’ihi ya, e kwesịrị iri nri ngwa ngwa o kwere mee mgbe e sisịrị ya. Ọ bụrụ na ọ dị gị mkpa idebe nri ruo ihe karịrị awa abụọ, jide n’aka na i debere ya n’ebe dị ọkụ ma ọ bụ n’ebe jụrụ oyi. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka i debe nri e siri esi ruo mgbe ọzọ ị ga-eri nri, kpuchie ya ekpuchi. Nke a ga-eme ka ijiji na ụmụ ahụhụ ghara ịbanye na ya. Tupu i rie nri ahụ, daa ya n’ọkụ.
Mmiri ara nne bụ mmiri ara kasị mma na nke kasị bụrụ nke na-adịghị ize ndụ nye ụmụ ọhụrụ. Mmiri ara ụmụ anụmanụ a ka sipụrụ n’ọkụ ma ọ bụ nke e siri n’ọkụ tinye na frig adịchaghị ize ndụ ka nke a na-esighị n’ọkụ. Zere iji karama ndị a na-eji enye ụmụ ọhụrụ mmiri eme ihe, ọ gwụla ma i ji mmiri gbọrọ agbọ saa ya mgbe ọ bụla ị chọrọ iji ya mee ihe. Karama ndị a na-eji enye ụmụ ọhụrụ mmiri na-ebukarị nje ndị na-akpata afọ ọsịsa. Ọ ka mma inye ụmụaka ara ma ọ bụ iji iko dị ọcha na-enye ha nri.
Na-eji mmiri dị ọcha asa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Nke a dị mkpa karịsịa ma ọ bụrụ na a na-enye ha ụmụ ọhụrụ na obere ụmụaka n’esighị ha esi.
6 Na-ekpofu dọtị nile a zapụtara n’ụlọ.
Ijiji, ọchịcha, òké, na nkapị na-ebucha nje. Ụmụ anụ ndị a na-amụba nnọọ n’ihe mkpofu. Ọ bụrụ na e nweghị usoro ikpofu ihe n’ebe i bi, na-etinye dọtị ị zapụtara n’ụlọ n’olulu ahịhịa, bụ́ ebe a pụrụ ili ya ma ọ bụ suo ya ọkụ kwa ụbọchị. Na-edebe ụlọ gị ọcha ma mee ka dọtị na mmiri ruru unyi ghara ịdị na ya.
Ọ bụrụ na ị na-agbaso aro ndị a mgbe nile, n’oge na-adịghị anya, ị ga-achọpụta na ha ga-ama gị ahụ́. Ha esighị ike ịgbaso, a dịghịkwa achọ ego buru ibu iji tinye ha n’ọrụ, ma ha ga-echekwa ahụ́ ike gị nakwa nke ezinụlọ gị.
N’ebe a na-enweghị ụlọ mposi ma ọ bụ ogwe, na-eli nsị n’ala ozugbo
Na-akwọ aka gị mgbe nile
[Foto dị na peeji nke 14, 15]
Ezinụlọ agaghị na-arịakebe ọrịa mgbe ha na-eji mmiri dị ọcha eme ihe ma na-eme ka nje ghara ịbanye na ya
[Foto ndị dị na peeji nke 14]
Na-eji ncha na mmiri asa ihu gị kwa ụbọchị
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa na ị ga-edebe nri e siri esi ruo oge ọzọ ị ga-eri nri, kpuchie ya ekpuchi
E kwesịrị ịdị na-eli unyi ndị a zapụtara n’ụlọ n’ala ma ọ bụ na-esu ha ọkụ kwa ụbọchị